Mareykanka oo furay safaaradiisa Havana - BBC Somali
Mareykanka oo furay safaaradiisa Havana
Mareykanka ayaa dib u furay safaaradiisa magaalada caasimada Cuba ee Havana.
Safaradda ayaa xirneyd in ka badan 50 sano kaddib markii uu diblomaasiyiinta kala baxay markii uu halka sare joogay dagaalkii qaboobaa.
Saddex hore oo ka mid ahaa ciidamada badda Mareykanka oo markii hore calanka dhismaha safaaradda hoos u dhigay sanadkii 1961dii, ayaa hadana dib u saaray iyadoo astaanka qaranka Marekanka la garaacayo.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, John Kerry, ayaa sheegay inay waqti dhab oo taariikhi tahay, oo isku keenay labo qaran oo aan cadow isu sii ahaan doonin, oo daris ah.
In xiriirka diblomaasiyadeed uu caadi ku soo laabto, kaasi oo burburay markii uu yimid xisbigii shuuciyadda ee Fidel Castro, ayey bishii december ku heshiiyeen madaxweyne Obama iyo dhigiisa Raul Castro.